N’izu gara aga, mụ na Rob Eroh, onye na-arụ ọrụ ngwaahịa na injinịa na Milo. Milo bụ ụlọ ọrụ ọchụchọ ụlọ ahịa nke gbakwunyere na Point of Sale (POS) ma ọ bụ orlọ Ọrụ Na-enye Aka (ERP). Nke a na - eme ka Milo bụrụ injin na - achọ ihe kachasị mma ma a mata ihe dị na mpaghara gị. Ebumnuche Milo bụ ịnwe ngwaahịa niile na shelf ọ bụla na web…
Actionbọchị Ọgụgụ Blog - October 15th. Mmeri ngwungwu ngwaahịa gburugburu ebe obibi site na GreenHome Anyị na-enye ngwugwu ngwaahịa gburugburu ebe obibi ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọcha nke ọma ihe ngụkọta ngụkọta nke ndị na-ede blọgụ na-esonye na Blog Action Day ga-abụ. Ekwesiri ikwuputa na onwa mbu nke iri na ano dika onwa na Blog Blog. Mụtakwuo ma were echiche gị